အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ Biodegradable အိတ်? အကောင်းဆုံး Biodegradable အိတ် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့မှုကိုအထူးပြုနေ Biodegradable အိတ်ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ အဓိကအားဖြင့်ဒီထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီထုတ်ကုန်သစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါ။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကောင်းမွန်စွာကမ္ဘာပေါ်တွင်တွင်ရောင်းချလျက်ရှိကြ၏ ဖောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူမြင့်မားကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။
ပုံစံ - PLA Single use -05
၁၀၀%biocompostable PLA ထုတ်ကုန်-ပလပ်စတစ်အိတ်
ပစ္စည်း:Extrusion တန်း PLA ဝင်း
SHANG SHEN CHENG Enterprise သည် ၀ ယ်သူများအား PLA ကုန်ကြမ်းများပေါင်းစပ်ခြင်းမှိုဖွံ့ဖြိုးစေရန်နှင့်အချောထည်ထုတ်လုပ်ရန်ဆေးထိုးခြင်း.တစ်ခုပေါ့-ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းခြင်းအများစုသည် BIO ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပြဿနာကိုမဆိုဖြေရှင်းရာတွင်ဖောက်သည်များအားကူညီနိုင်သည်.
အကောင်းဆုံး Biodegradable အိတ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Biodegradable အိတ် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ